ကော်လိုရာဒို WIC Bu | JPMA, Inc
အောက်ဖော်ပြပါသင်ခန်းစာများသို့ WIC သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကသင်တင်ပို့ပေးပါ။
WIC အစားအစာများသို့မဟုတ်ပမာဏများနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းလိုသည်များရှိလျှင်,
WIC ကအတည်ပြုထားသည်ဟုသင်ထင်သောအစားအစာတစ်ခုခုအားဝယ် ယူ. မရခဲ့လျှင်,
သင့်ပင်နံပါတ်ကိုဦးစွာပြောင်းပစ်ပြီးသင်၏ဒေသဆိုင်ရာ WIC အစီအစဉ်သို့ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ၎င်းတို့ကသင်၏အစားအသောက်ခံစားခွင့်များအားမည်သူမှအသုံးပြုခြင်းမရှိစေရန်တားမြစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားကတ်အသစ်တစ်ခုထုတ်ပေးရန်ကူညီမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကတ် အသုံးပြု. မရလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
သင့်ကတ်၏နောက်ကျောဘက်ရှိအခမဲ့အဝေးပြောဖုန်းလိုင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ WIC အစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
WIC ရုံးတွင်တင်ထားသောလက်ရှိအစားအစာခံစားခွင့်များချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ လာမည့်လများအတွက်အစားအစာခံစားခွင့်များကိုစတင်သည့်နေ့သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင်သင့် eWIC
Enfamil (မွေးစကလေးငယ်အတွက်စားစရာ) ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ရမည်နည်း။
သင်၏လက်ရှိခံစားခွင့်များကိုကြည့်ရန် WICShopper အပ်ပလီကေးရှင်းရှိ "ကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များ" ကိုအသုံးပြုပါ။
လက်ကျန်စာရင်းကိုစုံစမ်းရန်အတွက်သင်၏ eWIC ကတ်နောက်ကျောဘက်ရှိအဝေးပြောအခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုပါ။
သင်၏လက်ကျန်စာရင်းကိုကြည့်ရန်နှင့်ပရင့်ထုတ်ရန်အတွက် www.ebtedge.com သို့သွားပါ။
သင်၏ eWIC ကတ်ဖြင့်စျေးဝယ်ထွက်ခြင်း
လုပ်ဆောင်ချက်အစတွင်သင်၏ eWIC ကတ်ကိုဆွဲပါ။
အတည်ပြုထားသည့်အစားအစာအမျိုးအမည်များ၏ပမာဏနှင့်သင်ဝယ်ယူလိုက်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ဒေါ်လာပမာဏကိုသင့် WIC စာရင်းမှဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
အခြားမည်သည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံမပြုလုပ်မီသင့် eWIC ကတ်ကိုဆွဲပါ။
ကျန်ရှိနေသည့်လက်ကျန်ငွေကိုငွေသား, EBT, သို့မဟုတ်စတိုးမှလက်ခံသည့်အခြားပေးချေမှုပုံစံဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည် SNAP ။
ပင်နံပါတ် (တစ်ကိုယ်ရေသက်သေခံနံပါတ်) ဆိုတာဘာလဲ။
သင်၏ WIC သည်သင်၏နံပါတ်များကိုအတိအကျလျှို့ဝှက်စာရင်းထဲထည့်ထားပါ။ WIC သည်သင်၏ WIC ကိုခွင့်ပြုပြီးလူအများနှစ်သက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အချက်အလက်များသည်မှတ်မိစေရန်အတွက်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ကြားပေးသောခက်ခဲသောအချက်အလက်များသည်သင့်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပြီးခက်ခဲသောမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမှတ်သားပါ။
သင့်ကတ်ကိုအသုံးမပြုစေလိုသူများအားသင့်ပင်နံပါတ်ကိုမပေးပါနှင့်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ပင်နံပါတ်ကိုသိရှိပြီးသင့်ကတ်ကို အသုံးပြု. သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင့်အစားအစာခံစားခွင့်များကိုရယူခဲ့ပါကထိုခံစားခွင့်များကိုအစားထိုးပြန်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သင့် eWIC ကတ်နောက်ကျောဘက်ရှိအခမဲ့အဝေးပြောဖုန်းကိုခေါ်ဆိုပါ။
သင်၏မှတ်စုစာအုပ်ကိုမှတ်မိစေလိုလျှင်မှတ်ထားပါ။ မှတ်ချက်ရေးထားသည့်လေးလုံးလေးလုံးမှာမှတ်သားလောက်အောင်မှတ်သားထားသူမှတ်မိစေသူကိုရေးထည့်ပါ။ မှတ်မိစေချင်သောအချက်အလက်များအနေဖြင့်အလင်းရောင်အားအကာအကွယ် ပေး၍ မှတ်မိစေခြင်း။ သင့်ရဲ့သန္နိဌာန်များကိုသန်းခေါင်စာရင်းတွင်မြန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်။ သင့်အကောင့်ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံလိုပါကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်။